Yahoo Sports - ရမှတ်များ၊ အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့်အထူးတင်ပြချက်များ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Yahoo ကအားကစား - ရမှတ်များ, စာရင်းအင်း, သတင်းများ, & ပျေါလှငျ
Yahoo ကအားကစား - ရမှတ်များ, စာရင်းအင်း, သတင်းများ, & ပျေါလှငျ APK ကို
stream တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ CONCACAF ချန်ပီယံလိဂ်ကင်း tab မှာကိုက်ညီမှု!
Yahoo ကအားကစားအပေါ် NBA လိဂ် Pass ကို Watch! အဆိုပါ 2018-2019 ရာသီအဘို့သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်တိုက်ရိုက်, Out-of-စျေးကွက် NBA ဂိမ်း stream ။
Yahoo ကအားကစားနောက်ဆုံးပေါ်ရမှတ်များ, စာရင်းများနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများလိဂ်ပွဲစဉ်အပေါ်အင်ဖိုဝင်ရောက်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကစားလက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒါ NFL, NBA, NHL, NCAA, MLB, MLS နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူ, Yahoo ကအားကစားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ updates များကိုအတူဂိမ်းထဲမှာသင်ကစောင့်ရှောက်။
NFL: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, ဒေသခံဂိမ်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရမှတ်ရပျေါလှငျ, သတင်းနှင့်စာရင်းဇယားကိုချိုးဖောက်
NBA, WNBA: ရမှတ်, ပျေါလှငျ, သတင်းခြိုးဖောကျ
NHL: ရမှတ်, ပျေါလှငျ, ကိုချိုးဖောက်သတင်း
MLB: သတင်းကိုချိုးဖောက်ရမှတ်, ပျေါလှငျ,
ကောလိပ်ဘောလုံး, ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော, ကောလိပ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော
ဘောလုံး: ပရီးမီးယားလိဂ်, ချန်ပီယံလိဂ်, ယူရိုပါလိဂ်, လာလီဂါ, အီတလီစီးရီးအေ, ဘွန်ဒစ်လီဂါ, ဘရာဇီးစီးရီးအေ, MLS, လီဂူး 1 နှင့်များစွာသောအများအပြားကပို
ဂေါက် - PGA, LPGA, PGA ချန်ပီယံ, PGA Web.com, PGA ဥရောပ
အော်တိုပြိုင်ပွဲ - NASCAR Sprint, NASCAR Xfinity, IndyCar, ဖော်မြူလာ 1
တင်းနစ် - အမျိုးသားများရဲ့တင်းနစ်အမျိုးသမီးရဲ့တင်းနစ်
Yahoo ကအားကစားဥစ္စာ Make:
1 ။ အားလုံး devices တွေကိုဖြတ်ပြီးအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရရန်သင့်ကို Yahoo အကောင့်နဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
2 ။ သင်လုပ်ချင်တဲ့အားကစားအကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်သတင်းရရှိရန်နှင့် update လုပ်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများလိဂ်ပွဲစဉ်ကြယ်ပွင့်။
3 ။ သူတို့ကိုသင်ချင်တဲ့အခါသင်အကြောင်းကြားစာများရနိုင်အောင်သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများလိဂ်ပွဲစဉ်များအတွက်သတိပေးချက်များသတ်မှတ်မည်။ သူတို့တစ်တွေပြေးဂိုးသွင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းစတင်သည်တဲ့အခါမှသာအခါတိုင်းထွက်ရှာပါ။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။
4 ။ အဆိုပါ app ထဲမှာဒန် Wetzel, Jeff Passan နှင့် Pat Ford နဲ့တူကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများထံမှသီးသန့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရယူပါ။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကိုသငျသညျ Nielsen ရဲ့တီဗီ Ratings အဖွဲ့ကဲ့သို့စျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen ရဲ့စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် www.nielsen.com/digitalprivacy ဖတ်ရှုပါ။ သင်တို့သည်လည်း Nielsen တိုင်းတာခြင်းထဲကရွေးချယ်ဖို့ app ထဲမှာ Settings များသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
ထို 2019 NFL မူကြမ်း Follow!
အားလုံးထောင့်ကနေနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ရေးအစည်းအဝေးဖုံးအုပ်, တိုက်ရိုက် Yahoo ကအားကစား NFL မူကြမ်း Watch, သင်၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းများကိုမိမိတို့၏လာမယ့်ကစားသမားကောက်အဖြစ်စိတ်ကြိုက်မူကြမ်းအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလိုက်နာ!
Yahoo ကအားကစား - ရမှတ်များ, စာရင်းအင်း, သတင်းများ, & ပျေါလှငျ
22.98 ကို MB
ဖြစ်သော CBS အားကစား App ကို - ...
Bleacher အစီရင်ခံစာ: ...
Skores - Live ...
theScore: Live ...
Forza ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ - ...
က Galaxy တိုက်ရိုက် Wallpaper
ယုတ္တိကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း - လေ့ကျင့်ခြင်း၊ သိကောင်းစရာများနှင့်လှည့်ကွက်များ
ကျခြင်း: အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောသည်။